Momba anay - Quanzhou Bangni Biotechnology Co., Ltd.
Quanzhou Bangnino mpanamboatra ny solosaina miasa, insul polyurethane ary vokatra fikarakarana tongotra ho an'ny mpanjifa sy marika marobe amin'ny firenena samihafa. Manolo-tena izahay amin'ny famolavolana, fampandrosoana ary famokarana vokatra insole mamorona sy ergonomika. ny elanelam-bokinay dia: insoles orthotic, PU insoles, insoles fanamafisana, vokatra fikarakarana tongotra Poron / gel ary insoles azo ovaina hafanana. Eto izahay dia manolotra famolavolana sary an-trano, famolavolana vokatra, fanaovana bobongolo, fanaovana santionany, famokarana vokatra, famonosana vahaolana ary serivisy fandefasana. Manana fahaiza-manao matanjaka koa izahay amin'ny OEM sy ODM. Ny orinasanay dia ivotoerana famokarana 7500 M2 misy mpiasa maherin'ny 100. Amin'ny alàlan'ny fantsom-pamokarana marin-toerana sy samihafa dia afaka manova haingana ny hevitry ny mpanjifa ho vokatra isika. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny teknolojian'ny famokarana matotra dia tsy ho ela isika dia afaka manao ireo vokatra ho famokarana mahomby.
Manana fahalalana, herin'olona & fitaovana izahay hanampiana anao hahavita ny asa. Azafady mba mifandraisa aminay anio raha mila fanazavana fanampiny na mangataka teny nindramina — manantena ny hihaino anao sy ny ekipanao izahay!
Ho mpanamboatra orinasa ambony
Fanavaozana sy fampidirana
Mifantoha amin'ny famoronana sanda ho an'ny mpanjifa
Manompoa ny mpanjifa, mahatratra sanda amin'ny mpiasa, manomeza anjara biriky ho an'ny fiarahamonina
Marina sy ara-potoana
Bangni dia tsy orinasa mpamokatra entana ihany; izy io koa dia orinasa nanolo-tena hamorona tontolon'ny asa feno fanajana, iraisan'ny rehetra, mifampiresaka ary mahatoky.
Ny fandraisana anjaran'ny mpiasa amin'ny ambaratonga rehetra no lakilen'ny fananganana ny kolontsainay Bangni tokana
Ka ahoana no fomba hananganana ny kolontsain'ny orinasanay, ampiasantsika fomba telo eto ambany io:
1. Fampitana isan'andro: mamporisika ny mpiasa izahay hampiasa ny fotoanany malalaka hanoratany ny zavatra niainany, ny tolo-kevitr'izy ireo na ny fahatsapany momba ny asa, orinasa na fiainana. Manana fivoriana isan'andro izahay amin'ny fiandohan'ny andro amin'io fotoana io, hanasa ny mpiasanay hamelabelatra ny sanganasany. Amin'ny faran'ny taona dia hanangona ny sanganasa tsara rehetra izahay hamoahana boky iray isan-taona- BANGNI VOICE
2. Gazety isam-bolana: isam-bolana, ny publicité dept dia hamoaka brochure iray hanavaozana ny fandrosoana nataon'ny orinasa sy ny activate rehetra anay.
3. Hetsika fananganana ekipa: filalaovana lalao, fifampiresahana na fisakafoanana miala sasatra fotsiny.
Ao Bangni, tompon'andraikitra amin'ny mpanjifantsika sy ny mpiasanay izahay. Manolo-tena izahay hanome ny mpanjifanay ny kalitaon'ny serivisy sy vokatra tsara indrindra. Mandritra izany fotoana izany dia mifantoka amin'ny fanomezana tontolo iainana azo antoka sy sariaka ho an'ny mpiasanay koa izahay. Nanolo-tena hanao fanaraha-maso izahay.
Hetsika fanarahan-dalàna ara-tsosialy
Initiative fanarahan-dalàna ara-tsosialy BSCI